कैलाशको कुटी: कनेक्सनः हङकङ-नेपाल
यस्तै कनेक्सहरुकै कारण ले हाम्रा रिति , सस्कृति र जीवन शैलीहरु हुदै जादैछन .... कैलाश जी ! अनि मलाइ लाग्छ यसमा केहि राम्रा र केहि नराम्रा सस्कारहरु पनि जोडिएर आएका हुन्छ तर !
धेरै राम्रकुरा अपनाउदा केहि नराम्रा कुराहरु आए भनेर आफ्नो गति नै रोक्ने हो भने त ... परिवर्तन नै भएन नि ... तर यो समय नै परिवर्तन छ नि !
त्यसको लागि केहि उदाहरणहरु पनि यहाले प्रस्तुत गर्नु नै भएको छ नि !
हङकङे नेपालीको जीवनशैली र रहन सहनको बारे जानकारी मुलक यो लेखको लागी कैलाशजीलाई धन्यवाद! पक्कै पनि हङकङमा नेपालीहरुको नेपाली साहित्य र कला प्रति निक्कै योगदान छ । चाडपर्व ईत्यादि मनाउने तरिका अन्यत्र समेत उस्तै भएपनि हङकङेहरु अलि अगाडी नै छन् जस्तो मलाई लाग्छ ।